ပြီးပြည့်စုံသော Pot Roast (ဒါကြောင့်နူးညံ့။ အရသာရှိသည်!) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ရန်အစားအစာအစီအစဉ် ၁၂၀၀ ကယ်လိုရီ
ဘေကွန်မီးဖို၌ဝက်သား medallions ပတ်ရစ်
ဤလွယ်ကူသောစာရွက်သည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးမယုံကြည်နိုင်လောက်သောရလဒ်များကိုအခါတိုင်းရရှိစေသည်။ Chuck ကင်များသည်ဈေးပေါသောအသားနည်းသောအသားများဖြစ်ပြီးမီးဖို၌အပူချိန်နိမ့်ပြီးနာရီအနည်းငယ်ကြာချက်ပြုတ်သည်။ စုံလင်သောအစာအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချို့သောအရသာရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ထည့်ပါ။
ဆင်တူ မစ္စစ္စပီအိုးကင် မီးဖိုချောင်တွင်ပြုလုပ်ထားသောဤအိုးကင်ကိုမီးဖို၌ပြုလုပ်သော်လည်းအိုးကင်လည်းဖြစ်နိုင်သည် ချက်ချင်းအိုး၌ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သင်တစ် ဦး ရရှိပါသည်လျှင်!
အိုးကင်သည်မည်သည့်အိမ်ထောင်စုတွင်မဆိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အတူတူထားရန်လွယ်ကူသည်သာမက, ကြီးမားသောအိုးကင်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုကျန်ကြွင်းသူများအဖြစ်ပြုလုပ်သည်၊ ဒီချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်နွေးထွေးသောစာရွက်ကျော်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် အာလူးကြော် နှင့်တစ်ဘက်နှင့်အတူ အိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်မုန့် ။
Pot Roast ဆိုတာဘာလဲ
အိုးကင်သည်အမဲသားကင်ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအပူချိန်နိမ့်စွာချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောဆက်နွယ်သည့်တစ်ရှူးများကိုဖြိုခွဲ။ အရသာရှိသောဟင်းရည်နှင့်အမဲသားနူးညံ့သောအမဲသားကိုရရှိစေသည်။
အိုးကင်ရွေးရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုများတွင်အချိုကင် (ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှု)၊ လှည့်လည်လှည့်လည်ခြင်းသို့မဟုတ်အမြောက်ကင်ပင်ပါဝင်သည်
ကြက်သွန်နီ၊ မြက်ပင်တွေ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေပေါင်းစပ်ပြီးပါးစပ်ထဲအရည်ပျော်သွားတဲ့အထိဖုတ်ထားတယ်။
SEAR ဒယ်အိုးထဲသို့ဆီထည့်ပြီးနံပါတ ၀ ိုက်လုံးဆီသို့အညိုရောင်မထည့်မှီတိုင်အောင်ဘက္ကာအမဲဆီပိုကောင်းပါ။
မွေးဖွားသည် ကြက်သွန်နီကိုကင်ပတ်ပတ်လည်တွင်ထည့်ပြီးဝိုင်၊ ဟင်းရည်၊ ဆေးနှင့်စမုန်ဖြူများကိုထည့်ပါ။ မီးဖို၌ ၂ နာရီဖုတ်ရမည်။
VEGGIES ထည့်ပါ အာလူးနဲ့မုန်လာဥနီကိုထည့်ပြီးအာလူးတွေနူးညံ့တဲ့အထိနောက်ထပ်နှစ်နာရီခန့်ကြာအောင်ဖုတ်ပါ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ဒီစာရွက်ဟာပုံမှန်အားဖြင့် ၄ ပေါင် (ပေးသို့မဟုတ်ယူ) ခန့်မှန်းတဲ့အသားကင်ပေါ်အခြေခံသည်။ ကြမ်းတမ်းသောတစ်ရှူးများကိုဖြိုခွဲရန်အိုးကင်ကိုအပူချိန်နိမ့်စွာတွင်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်သည်။
3-3.5 နာရီများအတွက် 3lb ကင်ချက်ပြုတ်
3.5-4 နာရီများအတွက် 4lb ကင်ချက်ပြုတ်
4.5-5 နာရီများအတွက် 5lb ကင်ချက်ပြုတ်
ထမင်းချက်ချိန်သည်ကင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ခက်လျှင်ခက်သောအမှုဖြစ်လျှင်၊ အချိန်ပိုလိုအပ်သည် ချက်ပြုတ်ရန်။ အဲဒါကို back up လုပ်ထားပြီးချက်ပြုတ်ပါစေ။
Pot Roast Gravy လုပ်နည်း
ဤဟင်းရည်သည်အဆင့် (၃) ဆင့်သာရှိပြီးရိုးရှင်း။ အရသာရှိပါသည်။
ပြောင်းဖူးကစီဓာတ်၏ဇွန်းနှစ်ခွက်ကိုရေအေးတွင်ချောမွေ့သည့်အထိ (ဒီကိုခေါ်သည်။ ) slurry ) ။
အထူထူသည်အထိ slmering ဟင်းရည်ထဲသို့ slurry whisk ။
ကလေးအာလူးတွေဟာရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်အခွံမလိုအပ်ပါ။ သူတို့၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုကောင်းစွာကိုင်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။
လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ခြောက်သွေ့သောအပင်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်လတ်ဆတ်ခြင်းထက်ပိုမိုအာရုံစိုက်သောအရသာရှိသောကြောင့်ယင်းတို့ကိုအနည်းငယ်သာသုံးပါ။
ဆန္ဒရှိလျှင်ဇွန်း2ဇွန်းခရမ်းချဉ်သီးငါးပိထည့်ပါ။
အမဲသားသိကောင်းစရာများ & Gravy
အနှေးချက်ပြုတ် Barbacoa အမဲသား
သင်ဤ Chuck ကင်လုပ်ခဲ့သလား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်၂၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၄ နာရီ ၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၄ နာရီ ၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဤသည်အိုးကင်seasonုံရာသီဥတုနှင့်နူးညံ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢3-4 အလေးချိန်ပေါင် ကင်ကင် ဒါမှမဟုတ်အမြစ်ကင်
▢၁ ကြီးမားသည် ကြက်သွန်နီ ကုန်တယ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသေးငယ်တဲ့ကြက်သွန်နီ
▢၄ မုန်လာဥ2'အပိုင်းပိုင်းဖြတ်
▢နှစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရိုးတံ 1 ½ '' အပိုင်းပိုင်းသို့ဖြတ်ရ၏
▢၁ ပေါင် ကလေးအာလူး
▢၁ ခွက် ဝိုင်နီ
▢နှစ် ခွက် အမဲသားဟင်းရည် သို့မဟုတ်လိုအပ်သကဲ့သို့
▢၄ လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ ကြမ်းကုန်တယ်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း Rosemary
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း စမုန်ဖြူ
မီးဖိုကို 300 ° F အထိအပူပေးပါ။
ဒတ်ခ်ျမီးဖိုကြီးတစ်ခုတွင်အလယ်အလတ်မြင့်သောအပူထက် ၁ ဇွန်းဇွန်းဆီကိုအပူပေးပါ။ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ၄ မိနစ်ခန့်အညိုရောင်ထည့်သည်အထိအလှည့်ကျကင်လုပ်ပါ။
ကြက်သွန်ကြော်ကိုပတ်ပေးပါ။ စပျစ်ရည်၊ ဟင်းရည်၊ Rosemary၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်သမင်များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ကင်ကျော်လောင်း။ ပင်လယ်အော်အရွက်ထည့်ပါ။
အလယ်အလတ်မြင့်အပူကိုကျော်လွန်ပြီးမီးဖိုပေါ်၌မျှတည်ထားပါ။ ပြီးလျှင်မီးဖို၌အဖုံးထားပြီးလျှင် ၂ နာရီဖုတ်ရမည်။
အာလူး၊ မုန်လာဥနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုထည့်ပြီးနောက်ထပ် ၄ နာရီ (၄ ပေါင်လှော်အတွက်) သို့မဟုတ်ကင်နှင့်အာလူးသည်နူးညံ့သောနူးညံ့သည့်အထိမဖုတ်ပါနှင့်။
ပင်လယ်အော်အရွက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အမဲသားကိုကြီးမားသောအပိုင်းများသို့ခက်ရင်းခွနှင့်ဖြိုဖျက်ပါသို့မဟုတ်ထူထပ်သောအပိုင်းအစများသို့ဆွဲပါ။ ဖျော်ရည်များနှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် (သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလျှင်အောက်တွင်ဟင်းရည်ပါစေ)
To Gravy လုပ်ရန်:
2 ဇွန်းပြောင်းဖူးကိုချောမွေ့သည့်အထိဇွန်း ၂ ဇွန်းရေအေးနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
မြည်းစမ်းဖို့ဆား & ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူရာသီ။
သော့ချက်စာလုံးအကောင်းဆုံးအိုးကင်စာရွက်, Chuck ကင်, Chuck ကင်စာရွက်, တစ်အိုးကင်အောင်, အိုးကင်, အိုးကင်စာရွက် သင်တန်းအမဲသား၊ ညစာ၊ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ပြတ်သားသော Kale ချစ်ပ်များ
ကောင်း Pao ပုစွန်
အိမ်လုပ် Salsa (စားသောက်ဆိုင်စတိုင်)
အကောင်းဆုံး fluffy ဖရုံသီး pancakes
ဘေကွန်ဖျော်ဖြေ Jalapeno Poppers (ကင်)